Midowga Afrika oo soo dhoweeyay qabashadii Baydhabo iyo shirka London. – Radio Daljir
Midowga Afrika oo soo dhoweeyay qabashadii Baydhabo iyo shirka London.
Febraayo 23, 2012 12:00 b 0
Addis Ababa,Fec 23 -Sarkaal katirsan ururka Midowga Afrika ayaa soo dhoweeyay qabashada magaalada Baydhaco ee xarunta gobolka Bay oo ay ciidamada dowladda faderaalka iyo militeriga dalka Itoobiya shalay ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab.
El-Ghassim Wane oo ka mid ah saraakiisha ururka Midowga Afrika oo la hadlay Idaacadda VOA ayaa waxaa uu sheegay qabsashada magaalada Baydhabo inay kusoo beegantay xilli magaalada London uu ka furmayo shirka arrimaha Soomaaliya looga hadlayo,waxaana uu sheegay tallaabadaasi inay keeni karto fursad ay beesha caalamka ku xoojiyaan in la taageero dib u heshiisiinta iyo nabadaynta Soomaaliya.
Sarkaalka ayaa dhanka kale tilmaamay shirka London inuu yahay mid muhiim ah,ayna ka qaybgalayaan xubno kasocda ururka Midowga Afrika,isagoona sheegay inay muhiimadda siin doonaan shirka inta uu socdo sidii ay usoo bendhigi lahaayeen dadaallada nabadda iyo dib u heshiisiinta xiligaan socoda sidii looga miro dhalin lahaa.
Ciidamada dowladda faderaalka Soomaaliya iyo Militeriga dalka Itoobiya oo is garabasanaya ayaa shalay la wareegay magaalada Baydhabo oo ay katalinayeen ururka Al-Shabaab muddo sadex sanadood ah.
Xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya katirsan oo Ahlu-Sunnah Waljameeca la kulmay.
Baahin: Arbaca, Feb 22, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Ciidamada dawlada federaalka, Ahlu sunna & Ethiopia oo qabsaday Baydhabo; Al-shababa oo isaga baxay magaalada; Mudaaharaad lagu taageeray midnimada Somaliya, laguna gubay calanka Somaliland, oo ka dhacay Buuhoodle; Saraakiil ka tirsan ciidanka bilayka ee Puntland oo shil gaari ku galay duleedka Galkacyo.